Iyo Apple Watch inogona kudzivirira kuvhunduka kurwisa | Ndinobva mac
Apple Watch inogona kudzivirira kutyisidzira
Iyo Apple Watch yakagara kubvira yarega kungova smart wachi iyo inozivisa mameseji kana maalarm. Nguva pfupi yapfuura munda wezvehutano Kwaari, wachi iyi yakave yakakosha kukosha uye panguva imwecheteyo dambudziko rekuramba richichinja. Pamwe rimwe zuva wachi inogona kudzivirira kuvhunduka, huipi hushoma hunoonekwa asi hunorwisa nenzira ine simba.
Iyo Apple Watch inogona kuyera mwero wekushushikana uye nokudaro inokwanisa kudzivirira kuvhunduka.
Parizvino, imwe yeanonyanya kutaurwa nezverunyerekupe ndeyekuti mune inotevera software yekutarisa, ichakwanisa kuyera okisijeni kukosha muropa. Chinhu icho yaizopedza iyo EKG basa izvo zvaakatove nazvo kwemwedzi mishoma uye izvo zvakatoponesa mashoma mashoma. Asi iwe unodawo kuti igone kuyera mwero wekushushikana.
Sekureva kwenzvimbo dzakasiyana siyana, mainjiniya eApple anga achikurukura kuti ndeipi nzira yakanaka yekuita basa iri muwatch. Neimwe nzira kushushikana kwemunhu kunogona kuyerwa uye nenzira iyi kunyevera pamberi kuti vanogona kutambura nekutya kurwisa. Nenzira iyi waigona ipa mushandisi dzimwe nzira dzekuzorora, sekufema maekisesaizi. Chinhu chakafanana neicho chinopa wato kare nebasa rekufema.
Izvozvi zvinyorwa zvinoti kuti isu tione chimiro ichi paApple Watch, zvinotora nguva yakareba. Anenge makore maviri Izvi ndizvo zvavanofungidzira kuti zvichatora kusanganisira chimiro chevashandisi.
Ngatiendei nhanho nhanho uye ndinovimba pakupedzisira muWatchOS 7 iyo yeropa okisijeni mita ficha ichaverengerwa. Izvo nenzira, munguva dzino dzehosha vanopfuura mumwe vanogona kuishandisa mushe kuti uve nayo paruoko rwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inogona kudzivirira kutyisidzira
Bhawa Hapana chinhu chemahara chinodzivirira kubata netsaona kubva Kubata Bhawa
MonitorControl inoita kuti iwe ugadzirise kupenya kwesekondari yako Mac skrini